N'ogbe COVID-19 Antigen Rapid Test (Latex) onye nrụpụta na ndị na-ebubata ya Jikọọ kpakpando
JOINSTATR COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST nwere asambodo mbupụ zuru oke; na-adịghị emerụ ahụ; asu (oropharyngeal), sputum na stool nwere ike chọpụta, nchoputa n'oge na -eme ka uche gị sie ike
Innovative Ihe ọhụrụ zuru ụwa ọnụ, nchọpụta kpọmkwem nke protein pathogen S, nke mmụba nke nje anaghị emetụta ya, oke mmetụta ya na nkọwa ya, enwere ike iji ya mee nyocha mbụ;
● nlele dị mma na nke na-adịghị emerụ ahụ. Ụdị ihe nlele: mmiri oropharyngeal/sputum/stool, nke enwere ike iji nyocha onwe onye n'ụlọ n'oge iche iche, yana nyocha tupu ịmaliteghachi ọrụ na ụlọ akwụkwọ; Nnwale na-adịghị emerụ ahụ kwesịrị ekwesị maka nleba anya na-aga n'ihu nke ụmụaka na ndị agadi;
Method Usoro otu-ụzọ, dị mfe ịrụ ọrụ, na-ebelata nyocha efu ma ọ bụ ụgha nke njehie onye ọrụ kpatara;
● Enweghị akụrụngwa achọrọ, nchọpụta ngwa ngwa, nsonaazụ dị na nkeji 10-15;
● Nchekwa okpomọkụ: 2 ~ 30 ℃. Enweghị njem ụgbọ mmiri na-atụ oyi;
● Nkọwapụta: nnwale 1/igbe ma ọ bụ ule 25/igbe;
Ụdị nkwado dị iche iche: OEM/ODM nabatara.
Nyocha COVID-19 Antigen Rapid Test（Latex）
Nnwale coronavirus Antigen ọhụrụ nke 2019
Nnwale 25/igbe, ule 1/igbe
Ụdịdị imekọ ihe ọnụ dị iche iche
Akwụkwọ akụkọ coronavirus bụ nke us genus. COVID-19 bụ nnukwu ọrịa na-efe efe na-efe efe. Ndị mmadụ na -adịkarị mfe. Ugbu a, ndị ọrịa bu ọrịa coronavirus ọhụrụ bụ isi mmalite nke ọrịa; ndị ọrịa asymptomatic nwekwara ike bụrụ ebe na -efe efe. Dabere na nyocha ọrịa na -efe efe ugbu a, oge nnabata bụ 1 ruo ụbọchị 14, ọkachasị ụbọchị 3 ruo 7. Ihe ngosi ndị bụ isi gụnyere ahụ ọkụ, ike ọgwụgwụ na ụkwara akọrọ. Mkpuchi imi, imi imi, akpịrị akpịrị, myalgia na afọ ọsịsa na -ahụ n'ihe ole na ole.
Akwụkwọ akụkọ coronavirus na -awakpo mkpụrụ ndụ mmadụ site na njikọta nke glycoprotein spike (ligand) ya na onye na -anabata ACE2 nke dị na akpụkpọ ahụ mmadụ. N'ime ule a, e dochiela onye na-anabata ACE2 maka mgbochi iji guzobe ngwa nnwale chromatography ligand-receptor maka nchọpụta ngwa ngwa nke coronavirus akwụkwọ akụkọ.
Njirimara ịrụ ọrụ
Nke gara aga: Nyocha COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold)-Saliva nke Oropharyngeal
Osote: SARS-CoV-2 Influenza A&B Antigen Rapid Test